Saint Lucia mankalaza ny fisokafan'ny tsena fizahantany kanadiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » Saint Lucia mankalaza ny fisokafan'ny tsena fizahantany kanadiana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny sidina voalohany mankany Saint Lucia dia niverina taorian'ny sivy volana, taorian'ny fanafoanan'ny governemanta kanadianina ny sidina rehetra mankany Mexico sy Karaiba tamin'ny febroary 2021.
Ny Air Canada dia nanohy ny serivisy ho an'ny ririnina tany Saint Lucia tamin'ny Janoary 2021 nandritra ny onja fahatelo amin'ny areti-mandringana Covid-19.
Tamin'ny taona 2019, Saint Lucia dia nandray mpitsidika kanadiana maherin'ny 40,000 tany amin'ny nosy.
Air Canada dia hanidina serivisy tsy an-kiato avy any Toronto mankany Saint Lucia isan-kerinandro isan-kerinandro, avy eo mitombo sidina ho sidina 2 isan-kerinandro zoma sy alahady 31 oktobra.
Ho fahatsiarovana ny fisokafan'ny tsena kanadiana, ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia (SLTA), miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka fizahan-tany dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Hewanorra handray ny sidina Air Canada Rouge (1878) ny alahady 3 oktobraRD. Ny fiverenan'i Air Canada dia manambara ny fisokafan'ny tsena iraisam-pirenena fahaefatra lehibe indrindra an'ny Saint Lucia.
Air Madagascar nanohy ny fotoan'ny ririnina tany Saint Lucia tamin'ny Janoary 2021 nandritra ny onja fahatelo amin'ny areti-mandringana Covid-19. Ny sidina voalohany mankany Saint Lucia dia niverina taorian'ny sivy volana, taorian'ny fanafoanan'ny governemanta kanadianina ny sidina rehetra mankany Mexico sy Karaiba tamin'ny febroary 2021.
Tongasoa Air Madagascar, delegasiona notarihin'ny minisitry ny fizahantany Hon. Dr. Ernest Hilaire, misy ny filohan'ny filankevi-pitantanana -Thaddeus Antoine ary mpiasa ao amin'ny Fahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia, ny Saint Lucia Air and Sea Ports Authority (SLASPA), ary ny filohan'ny Saint Lucia Hospitality and Tourism Association - Paul Collymore.
Tonga tamin'ny 2 ora tolakandro ny sidina ary nahatratra 00 ireo teratany niverina sy mpitsidika ny nosy. Nisy takelaka fahatsiarovana iray natolotra an'i Kapiteny, Christopher Clarke, sy ireo mpiasa an-tsambo izay nidina niarahaba ny delegasiona. Ny serivisy fiverenan'i Air Canada tany Toronto (YYZ) dia niainga niaraka tamin'ny mpandeha 148 ary nanamora ny fanondranana vokatra 51 pounds ho any Canada.
Air Madagascar dia hanidina serivisy tsy an-kijanona avy any Toronto (YYZ) mankany Saint Lucia (UVF) isan-kerinandro isan-kerinandro, avy eo mampitombo ny sidina (2) sidina isan-kerinandro zoma sy alahady 31 oktobrast. Ny fandaharam-potoanan'ny ririnina dia ahitana sidina (4) isan-kerinandro hatramin'ny Krismasy, 25 Desambrath (Talata, Alarobia, zoma ary alahady. Saint Lucia koa dia vonona handray an-tanana ny Westjet sy Sunwing hiverina amin'ny herinandro ho avy.
Tamin'ny taona 2019, Saint Lucia dia nandray mpitsidika kanadiana maherin'ny 40,000 tany amin'ny nosy. Raha mitazona ny tanjona sy ny tsena kanadiana isan-karazany ny saina, ny Saint Lucia Tourism Authority dia hanohy hanentana ny fampielezan-kevitra matanjaka, lasibatra ary ny fifandraisana amin'ny daholobe eo amin'ny tsena, miteraka fahatsiarovan-tena bebe kokoa momba ny làlana haleha sy ny lalana fidirana.